Esi Esi nri anụ ezi na oven - Ndụmọdụ Na Nnukwu Echiche!
ude nke celery na karọt ofe
philadelphia mini cheesecakes na vanilla wafers
ọ dịghị esi nri chocolate peanut butter fudge
mexican salad uzommeputa na ọka ibe
Esi Esi nri anụ ezi na oven
Anụ ezi na oven - n'ezie ụzọ kachasị mfe isi esi ya! Mgbe m mụtara otu esi eme anụ ezi na oven, agaghị m alaghachi pan na-eghe ya ọzọ! Ọ na-apụta n'ụzọ zuru oke bụla oge.
Ọ dị mma maka igbutu ma gbakwunye na a nri ụtụtụ casserole , topping gwere poteto ma ọ bụ ọbụna nri ụtụtụ Sunday nke anụ ezi na àkwá.
Anụ ezi na oven
M hụrụ n'anya anụ ezi n'anya mana otu ihe anaghị amasị m anụ ezi bụ ihe ọdachi ọ nwere ike ime ma ọ bụrụ na ighe. Oge agafeela ebe m na-eguzo n'elu ite anụ ezi anụ ezi mgbe stovetop m na-agbasa na griiz.
Site na Bacon ọbọp anụ ezi anụ ka Bacon ọbọp Chicken , anụ ezi na-esi nri mara mma na oven (ma ọ bụ gbalịa anụ ezi na ikuku fryer !)
Kedụ ka ị si esi anụ anụ ezi N’olulu
Ọ dị mfe! Bido site n'ịtọ anụ ezi ahụ na mpempe akwụkwọ mmiri (kwụpụta ya na foil ma ọ bụrụ na ịchọrọ). Mgbe ụfọdụ oven eghe anụ ezi ntụziaka na-atụ aro a ogbe, Achọpụtara m na-ekwe ka anụ ezi na-anọdụ ala na ya drippings na-enyere ya crisp mma (kama ihicha).
Kpochapu oven na 400 Celsius.
Tinye anụ ezi na mpempe mmiri. Iji chekwaa ohere na pan gị, gbanye mpempe nke ọ bụla ka akụkụ buru ibu na-abụghị nke gara aga.
Ime anụ ezi ahụ nkeji 18 ma ọ bụ ruo mgbe anụ ezi ahụ ruru ogo crispiness chọrọ (ọ dịghị mkpa ka ọ tụgharịa ya).
Wepu anụ ezi ahụ na pan ma tinye ya na akwa nhicha akwụkwọ iji kpochapụ griiz.
Enwere ike idozi anụ ezi anụ ezi na pan wee gbakwunye ya Arụ Ọrụ Na-arụ n'ụlọ , akwa salad, BLT Pasta Salad ma ọ bụ maka ighe nsen!
Esi Esi nri anụ ezi Turkey na oven
Turkey anụ ezi hụrụ, na-a rejoiceụrị ọ rejoiceụ! Anụ ezi anụ Turkey ga-esi nri otu anụ ezi anụ ahụ na oven, mana ọ ga-ewe obere oge (ihe dịka 11-13 nkeji). Anụ ezi Turkey na-eme ezigbo ihe iji dochie anya ọtụtụ ntụziaka!
Ezi nri Bacon Na-amasị M
Bacon Green Bean Bundles - Gaa n'ihu!
Ọkụ Bacon Chiiz Gwunye
Anụ ezi Cheesburger Bombs - Akwa maka nri ehihie!
Brown Sugar Bacon Ejiri Smokies
Dil Pickle Bacon Grịlịiz - Favorite uzommeputa!
Anụmanụ Ube oyibo wepụrụ akwa
5site nairi na otuvotu NyochaNtụziaka
Oge Nkwadebe5 Nkeji Oge nri18 Nkeji Oge zuru ezu3. 3 Nkeji Ọrụ8 servings Onye edemedeHolly Nilsson Nke a bụ otu esi esi nri anụ ezi na oven ka ọ na-apụta n'ụzọ zuru oke oge ọ bụla. Bipute Ntụtụ
▢1 ngwugwu anụ ezi
Dozie anụ ezi na mpempe akwụkwọ.
Ime ruo minit 18-20 ma ọ bụ ruo mgbe anụ ezi dị mma.
Nyefee na akwa nhicha akwa akwụkwọ.
Calorisị:Ogbe 230,Protein:6g,Abụba:iri abụọ na otug,Abụba Ajuju:7g,Cholesterol:36mg,Sodium:Ogbe 365mg,Potassium:Ogbe 109mg,Vitamin A:iri abụọIU,Calcium:3mg,Iron:Ugboro abụọmg
Isiokwuanụ ezi, esi esi nri anụ ezi na oven, oven asara n'ọkụ anụ ezi N'ezieNri ụtụtụ Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Kekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .